TOPNEWS:-Golaha Dhexe ee xisbiga Deegaanka Soomaalida ka arrimiyo oo Addis Ababa tagay
Jig Jiga (Raaso news 24 ) : In kabadan 40 xubnood oo ka mid ah golaha dhexe ee Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida Itooba ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa, sida ay warbaahinta dowlad deegaanka u xaqiijiyeen xubno ka tirsan golahaas. Xisbigan oo ah midka ka arrimiya deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii u dambeeyay ka biyo diidanaa […]
Maamulka kmg ah ee degmada raaso oo qabtay kulan looga hadalayay amaanka iyo midnimada.
Raaso maamulka kumeelgaadha ah degmada raaso oo soo abaabulay kulan looga hadalayay nabadgalyada iyo midnimada shacabka ku dhaqan degmada raaso iyo deriskood iyagoo shacabka ka wacyogalinayay sidii nabadgalyada gacan buuxda loogu qaban lahaa loogana hortagi lahaa waxa kasta oo qalalaase ka abuuraya degmada iyo deriskeedaba shacabka ayaa si buuxda u balan qaaday in ay gacan […]
Akhriso:-Dowlada Itoobiya oo amar ku bixisay in Hawada laga saaro Internetka Maxay Tahay Sababtu?
Adis ababa(Raasonews)- Dowlada ayaa sheegtay in muddo Seddex cisho ah aan deegaanada Soomaalida laga isticmaali karin wax interneet ah. Dowladu waxa ay tilmaantay in jarista Internet-ka ay uga gol leedahay xasilooni kusoo dabaalida deegaanada Soomaalida oo iminka ay gacanta ku hayaan Ciidamada Militeriga. Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee shaqooyinkooda ay ku xiran tahay ayey dowlada Itoobiya […]
Minnesota (Raaso News 24): Iyadoo bilihii ugu danbeeyayba ay dhacayeen dagaalo iyo iska horimaadyo u dhaxeeya labada Qowmiyadood ee Oromada iyo Soomaalida wada dega dalka Itoobiya oo ay ku naf-waayeen Boqolaal dad ah oo ka kala tirsan labada dhinac, ayaa waxaa baaq nabadeed oo arrintaa la xiriira diray markii ugu horeysay Jaaliydaha labada dhinac ee […]